Kenyaanka oo rajeynaya in dowladda ay xayiraadaha qaado – Radio Damal
Kenyaanka oo rajeynaya in dowladda ay xayiraadaha qaado
Iyadoo madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta la filayo inuu maanta khudbad jeediyo ayay in badan oo Kenyaanka ka mid ah ku raja weyn yihiin inuu fududeyn doono xayiraadaha jira ee lagu xakameynaya faafitaanka fayraska corona.
Mr. Uhuru Kenyatta ayaa looga fadhiyaa inuu qaato go’aan adag oo dib loogu soo noleynaya dhaqaalaha sido kalena lagu badbaadinayo nolosha dadweynaha.
Xayiraadaha dalka ka jiro ee ay shacabka si weyn u hadal hayaan waxaa ka mid ah inaan la soo geli Karin sido kalena laga bixi Karin ismaamullada Nairobi, Mombasa iyo Mandera.
Sido kale waxaa tan iyo 27-kii bishii saddexaad ee sannadkan wadanka ka jira Bandow xilliga habeenkii ah.
Tallaabooyinka dowladda ayaa waxaa ka dhashay saameyn dhaqaale iyo mid nololeed oo ballaaran.
Qaar ka mid ah shacabka ayaa dowladda u diray baaq ku aadan dib u furka dhaqaalaha
Waxaa weli xiran dugsiyada iyo goobaha cibaadada iyadoo sido kale la mamnuucay isku imaatinka dadweynaha.
Wasaaradda caafimaadka ayaa dhankeeda shacabka si joogto ah ugu boorinaysa inay u hoggaansamaan amarrada la soo saaray sida gacmaha dhaqashada, xirashada maaskarada iyo inaan aad la isugu dhawaan.
Sido kale wasaaradda ayaa walaac ka muujinaysa inay sare u sii kacayaan xaaladaha fayraska corona oo laga cabsi qabo in isbitaallada uu culeys dheeraad ah soo foodsaaro.
Dhanka kale ismaamullada dalka ayaan dhammaantood buuxin shuruudii lagu xiray ee ahayd in ugu dambeyn maanta ay diyaariyaan ugu yaraan 300 oo ah sariiraha loogu talagalay dadka uu soo ritay cudurka COVID19.
Dugsiyada dalka oo ay horay dowladda u sheegtay in dib loo furayo bisha sagalaad ee sannadkan ayaa waxay u badan tahay in la furo sannadka soo socdo.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa dhawaan shacabka ku nool wadamada qaaradda Afrika oo ay Kenya ka mid tahay ugu baaqay inaynan fududeysan cudurka.
Waxaa uu ku nuuxnuuxsaday in bilooyinka soo socdo ay xaaladaha cudur sidaha corona sii kordhi karaan.
Sido kale waxaan ilaa iyo hadda kala cadeeyn in Mr. Uhuru Kenyatta uu sii kordhin doono ama meesha ka saari doono mudada bandowga habeenkii iyo xayiraadda lagu mamnuucay in la soo galo ama laga baxo ismaamullada Nairobi, Mombasa iyo Mandera.